Translate let me check my facebook in Xhosa with examples
Results for let me check my facebook translation from English to Xhosa
I formati Elindelekileyo ye iCalendarEvent start
i miss you so much let me knw when to call u
Mandihlwayele, kudle omnye, Iingcambu zabaphume kum zincothulwe.
Ndizimase ngokwelizwi lakho, ndiphile, Ungandidanisi ekulindeni kwam.
Ndicela undibonise xa ungenile. Ekosi!
UThixo wam uya kundikhawulela ngenceba yakhe; UThixo uya kundibonisa abandilaleleyo.
Makandilinganise esikalini sobulungisa, Akwazi uThixo ukugqibelela kwam.
Wugcine umphefumlo wam, undihlangule; Mandingadani, ngokuba ndizimela ngawe.
nokuba ke ndithe ndanibuza, anisayi kundiphendula, anisayi kundikhulula.
Biza ke, ndisabele mna; Mhlawumbi ndithethe, undiphendule.
Ndiya kuquqela kuwe ngentliziyo yam yonke; Musa ukundilahlekanisa nemithetho yakho.
Yithini tu! Ndiyekeni, ukuze ndithethe, Kundihlele okundihlelayo.
Ndizimela ngawe, Yehova, Mandingaze ndidane naphakade:
Ayimbalwa na imihla yam? Makayeke, Adede kum, ndikhe ndincumeze kancinane,
lyme disease (English>Afrikaans)moisista (Finnish>English)bajonet (Czech>Italian)nutritionnelle (French>Finnish)como se escreve volta em ingles (Portuguese>English)ik moet (Dutch>Danish)how do you'll eat me (English>Hindi)laissé (French>Maori)you might scoff (English>Italian)tumalo (Chamorro>Tagalog)我爱你 (Chinese (Simplified)>English)all (Italian>Latin)people skills (English>Tagalog)kundërshtime (Albanian>Serbian)pynt (Danish>Polish)jorder (Norwegian>English)pochentong (Vietnamese>English)prudent meaning (English>Tagalog)translate (Tamil>English)tumescence (French>Portuguese)all pages in range (English>Russian)god is not caught off guard (English>Tagalog)tholai nokku parvai meaning (Tamil>English)jiu dian (Chinese (Simplified)>Indonesian)essay on nanna kanasina bharatha kannada (English>Kannada)